စားကြဦးမလား (နှလုံးရောဂါရှိသူ၊ ရွံတတ်သူများ လုံးဝမကြည့်ရ) နောက်ဆက်တွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » စားကြဦးမလား (နှလုံးရောဂါရှိသူ၊ ရွံတတ်သူများ လုံးဝမကြည့်ရ) နောက်ဆက်တွဲ
စားကြဦးမလား (နှလုံးရောဂါရှိသူ၊ ရွံတတ်သူများ လုံးဝမကြည့်ရ) နောက်ဆက်တွဲ
Posted by panpan on Aug 8, 2011 in Other - Non Channelized | 24 comments
နောက်ဆက်တွဲပုံများ ကြောက်တတ်သူများ မကြည့်ရ
ဒီပုံတွေမှာတော့ ချက်ပြုတ်နေတာတွေပါ ပါတယ်
chit has written 61 post in this Website..
View all posts by panpan →
ဇာတ်တူသားစားကြတာ.. တော်ောတ်လေးရွံဖို့ကောင်းတယ်နော်…. အဲဒါ ထိုင်းမှာထင်တယ်နော်
သူကြီးသေသွားသော် ဒီလို မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပါတယ်။
သတိပေးထားလျက်နဲ့ဝင်ကြည့်မိတာ နာ့အပစ်
အသိသညာ တစ်ခုတိုးလာသမို့ ကျေးဇူးပါ
ဒီလိုအဖြစ်မျိုး ရှိလိမ့်မယ် လို့ မမျှော်လင့်ခဲ့မိပါဘူး
ထူဆန်းအံ့သြ ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းလိုက်တာ
ကြည့်ရင်းနဲ့တောင် ညှီစို့စို့ အနံရပြီး၊ အန်ချင်လိုက်တာ…ဝေါ့..
အဲဒီပုံတွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံနာရေးကူညီမှုအသင်းရဲ့ ဆွေမျိုးမရှိသောအလောင်းများသိမ်းစည်းရေး လုပ်နေကြ
အရိုးသက်သက်ကိုသာ လိုချင်လို့ ယခုလိုအသားတွေကို နွှင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့စားနေကြတာက ပဲပြားနဲ့ကြော်ထားတဲ့ သက်သက်လွတ် ခေါက်ဆွဲကြော်ပါ။
လူသားစားနေကြတာလုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးက မရွှံ့ဘူး…ယူလာခဲ့ပါဆိုလို့ ယခုလိုစားနေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ရှင်းလင်းပြောကြားသွားပါတယ်။
ဒီကိစ္စဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဟိုးလေးတစ်ကျော်ကျော်ဖြစ်သွားလို့ နာရေးကူညီမှုအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူများက
သူတို့အသင်းရဲ့ တစ်ခြားသော အလောင်းများ သိမ်းစည်းပုံကို ကြည့်ချင်ရင် အောက်ပါလင့်မှာ
ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခြားကြောက်စရာကောင်းသော အလောင်းများ သွားသိမ်းရတာတွေလဲ အများကြီး
လူအရိုးတွေထွင်ထုတ်တဲ့ပုံနဲ့.. စားသောက်နေကြပုံတွဲတင်လိုက်တော့… ဖတ်ရ… မြင်တဲ့သူတွေထင်ရောင်မြင်မှား ဖြစ်ကုန်တာပေါ့..။ ( စာတဆင့်ဖြန့်သူ ပန်ပန်ကို ပြောတာမဟုတ်ပါ)
ဖြေရှင်းပေးတဲ့.. ကိုရင်ငှက်ကြီးကို ကျေးဇူးကမ္ဘာတင်ကြောင်းပါခင်ဗျား…။:)
အဲတော်သေးတာပေါ့ ကိုငှက်ကြီးကယ်လို့ ။တောင်းပန်ပါတယ် နော်။အင်မတန်မွန်မြတ်တဲ့ လူမှုရေးအသင်းပါလား
ခုမှပဲ အလုံးကြီးကျသွား ပါတော့တယ်.. ပထမတော့ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်မိပါတယ်..ဗဟုသုတ နည်းသေး
လို့ ပါ.. စားတယ်ဆိုရင်လဲ လက်ရိုးလေးတွေ က အသားစလေး တွေကို ဘာကြောင့် ယူရ သလဲလို့စဉ်း
စားနေတာ.. ဟား .ခုတော့သိပါပြီ… စိတ်ထဲမှာလဲ ရှင်းလင်းသွားပါတော့တယ်..
ကိုခိုင် နဲ့ ကိုငှက် ဝင်ရှင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ.. နို့မဟုတ်ရင် ဒီတစ်ည အိပ်ရင်း စဉ်းစားနေရခက်နေဦးမှာ.
လက်အိပ်စွပ်ပြီး မလုပ်တဲ့သူများတယ်နော်၊ ဘာကြောင့်လည်း သိချင်သား…။ ကြောင်ကြီးသေလို့ရှိရင် ရွာထဲမှာ အရိုးစုလုပ်ပြဖို့ သဂျီးကိုအဲဒီလို လုပ်ခွင့်ပေးခဲ့မယ်။ (တကယ်ပြောတာနော် ကြောင်ကြီးသေရင် ခန္ဓာကိုယ်ကို လှူဖို့ organ donor အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားပြီးသား)
စိတ်ချ… မြန်မာပြည်ကို အရိုးတွေပြန်သယ်..။
လူတွေရှေ့ မှာ.. မီးပြင်းမြိုက်..အရိုးတွေမီးရှို့ရင်းတန်းလန်း.. အုန်းစိမ်းရေလောင်းပြီး.. အရိုးပြာတွေကို.. သံပုရာရည်ပျော့ပျော့နဲ့ ..ပြန်စိမ်ပေးမယ်..။
ယူအက်စ်က.. မီမိုရီရယ်ဆားဗစ်တွေမှာပါစုံစမ်းပေးပြီး.. ရောင်စုံအရိုးလုံးလေးတွေလုပ်တဲ့..နည်းပညာနဲ့ပါ.. လုပ်ထည့်လိုက်မယ်..။
ပြီးမှ.. ရွာမှာ.. ကျတယ်..ကျတယ်..ဆိုပြီး.. ပေးထားခဲ့လိုက်မယ်လေ…။
သူများတွေ အာရုံလွဲနေတုန်း လုပ်ထည့်လိုက်ပြန်ပီ…… သိတယ်နော် …. သိတယ်
အရိုးစုလုပ်ပြမယ်ဆိုရင် ဟိုတခါရိပ်သာတစ်ခုမှာ တရားရအောင်ချိတ်ထားတဲ့
ကျွန်မတော့ ဦးကြောင်ကြီးလို organ donateမလုပ်နိုင်သေးတော့
ဦးငှက်ပြောတဲ့ လင့်တွေ အတိုင်းဝင်ကြည့်မှ
ဒီလိုပြောလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဝေဖန်နိုင်တယ်လို့ ပြောတာဟုတ်ဘူး
မဟုတ်တဲ့နေရာတွေဆို မဆီမဆိုင် ဘုရားဟော ကာလာမ သုတ်ဆွဲထည့်ပြီး
ပရက်တီကယ်ဆင်းနေတာလား နည်းနည်းလေးတောင် မဆင်းစားမိကြဘူးလား
တချို့လက်အိတ်တွေမသုံးတော့ ရောကဂါပိုးကူးစက်မှာတော့ ကြောက်စရာပဲ
ဘာပဲပြောပြော ကိုကြောင်ကြီးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မြက်စားတဲ့ နွားရဲ့ အသားတောင် အတော် စားကောင်းတာ
မြက်စားတဲ့ ယုန်သားလဲ ထို့နည်း လည်းကောင်း
အဲဒီသတ္တ၀ါတွေကို အများကြီးစားတဲ့ .. ကောင်းတာတွေကိုမှ ရွေးစားတဲ့ လူ့အသား ပိုချိုတယ် ဆိုတာ
လူသားစားတဲ့ ကျားက အရင် သိသွားခဲ့တယ်
ဇာတ်တော်ထဲမှာ လူသားနဲ့ အရက်ကို မြည်းတဲ့ ဘုရင် အကြောင်းလဲ ဖတ်ဖူးကြမှာပါ
မြန်မာပြည်မှာ ဦးလာဘ ဆိုတာလဲ ဒီလိုပါပဲ
ဒါကြောင့် လူသား စားမိလို့ရှိရင် နောက်ထပ် လူသား စားချင်နေဦးမှာ
အဲသလို အစွန်းရောက်သွားရင် ????????????
အဲဒါ လူသားစားတာမဟုတ်ဘူးဆိုပဲ ဒေါက်တာရယ်
ဦးလာဘ တကယ်လေ ပုံပြင်မဟုတ်ဘူး ပန်ပန်ရဲ့ …
တောင်ဥက္ကာလာပမှာ ဦးလာဘ နေသွားတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိတယ်
အဲဒီမှာ သူပစ်သွားတဲ့ အရိုးတွင်းကြီးတောင်ရှိသေးတယ် …
ပိုစ့်ကိုစကြည့်ကြည့်ချင်းတော့ ရွံတယ်။ ကွန်မန့်တွေ ဖတ်ပြီးတော့ နားလည်သွားတယ်။ သာဓုခေါ်စရာပါ။